PHP, MySQL ကို (Microsoft ရဲ့) IIS မှာ တွဲသုံးခြင်း - MYSTERY ZILLION
PHP, MySQL ကို (Microsoft ရဲ့) IIS မှာ တွဲသုံးခြင်း
October 2007 edited June 2010 in PHP
Installing and Configuring IIS,
၁ ။ Windows XP Installer DC ကို Run လိုက်ဗျ။ ပီးရင် Install Windows Otpional Components ကို Click လုပ်
၂။ Internet Information Service(IIS) ရဲ့ Check Box ကို On လိုက်။ ပီးရင် Next ကို Click လုပ်။ Install လုပ် :1:
( Install လုပ်ပီးရင် C:\_Intpub\_wwwroot ဆိုတဲ့ Directory ကို တွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒါ IIS ရဲ့ root folder ပဲ )
၃။ Desktop ပေါ်က My Computer ကို Right Click လုပ် Manage ကိုရွေး။ အောက်ဆုံးမှာ Services & Applications ကို တွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Internet Information Service(IIS) ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒါကို Right Click လုပ်။ Properties ကိုရွေး။ ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ လိုသလို Configure လုပ်.
၁ ။ PHP Installer ကို Run. Costume Installation ကိုရွေး၊ C:\_Intepub\_wwwroot ထဲကို Install လုပ် ။
၂ ။ phpmsql.dll ဆိုတဲ့ files ကို Internet မှာရှာDownload လုပ်ပီး C:\_Intepub\_wwwroot မှာထည့်။
၃။ C:\_windows\_php.ini file ကိုဖွင့် ..extension_dir="./" ကို ရှာ extension_dir="C:\_Intepub\_wwwroot" လို့ပြောင်း
၃။ ;extension= phpmysql.dll ကို ရှာ ရှေ့က ';' (Semi-colum) ကို ဖျက် ။ ပီးရင် Save လုပ်
( phpmysql.dll ဆိုတာ က PHP နဲ့ MySQL နဲ့ ချိတ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာ . :71: )
၁ ။ MySQL ကတော့ အဆင်ပြေသလိုသာ ကြည့်ကြက် Install လုပ်လိုက်။ ရတယ်။ \_:D/
October 2007 edited October 2007 Administrators
အရင်ဆုံး PHP ကို http://www.php.net ကနေ Download ချ လိုက်ဗျာ။ ပြီးရင် Zip ဖြည်ပြီးတော့ C:\_PHP ဆိုတဲံ folder ဆောက်လိုက်။ အဲဒီအထဲကို ကူးချ Zip ဖြည်ထားတဲ့အထဲမှာ ပါတာတွေကို ကူးချလိိုက်။ ကျွန်တော် ပြောတဲ့ သဘောက C:\_PHP\_ မှာ ထည့်ခိုင်းတာနော်။ အဲဒီ အောက်ကို Folder လိုက်ကူးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအောက်ကို php-cgi.exe ပါတဲ့ ဟာကို ကူးခိုင်းတာ။ အဲဒီမှာ ဘာ Folder တွေရှိလာမလဲဆို
php.ini-recommended ကို နောက်က -recommended ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် C:\_PHP\_php.ini ကိုပြင်မယ်။
;cgi.force_redirect = 1 ရှေ့က ; ကိုဖြုတ်လိုက်။
cgi.force_redirect =0လို့ပြင်လိုက်ပါ။
;include_path = Гўв‚¬Е“.;c:\_php\_includesГўв‚¬Вќ ကိုရှာလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ; ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
; Windows: Гўв‚¬Е“\_path1;\_path2″
include_path = Гўв‚¬Е“.;c:\_php\_includesГўв‚¬Вќ
extension_dir = Гўв‚¬Е“./ext/Гўв‚¬Вќ ဆိုပြီးပြင်ပါ။ ပြီးရင်
extension=php_gd2.dll ကိုရှေ့က ; ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
extension=php_imap.dll ၊ extension=php_mysql.dll တို့ကို လည်း ရှေ့က ; ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် php_mysql.dll အောက်မှာ
ပြီးရင် save သိမ်းလိုက်ပါ။
Website အောက်က Default website ကို r-click လုပ်။ Properties ကို click လုပ်ပါ။ Home Directory ဆိုတဲ့ Tab ကို၀င်လိုက်ပါ။ Configuration Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Mapping မှာ Add ကိုနှိပ်။ Executable မှာ C:\_PHP\_php-cgi.exe ကိုရွေးလိုက်ပါ။ Extension ကို .php လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ။
လို့ရိုက်လိုက်ပြီး C:\_Inetpub\_wwwroot ထဲမှာ infophp.php အဖြစ်သိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် IE မှာ http://localhost/infophp.php ကို run လိုက်ပါ။ php နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Information တွေပေါ်လာပါမယ်။ ဒါဆိုရင် PHP သွင်းပြီးသွားပြီ။
PHP4နဲ့ PHP5ဘာကွဲသလဲဆိုတာတော့ သေသေချာချာမသိဘူး။ ကျွန်တော်က PHP4တုန်းက Database ကို UTF-8 နဲ့သွားသိမ်းလို့မရဘူး။ PHP5 ရောက်တော့ သိမ့်လို့ရသွားတယ်။ မြန်မာစာတွေကို ကောင်းကောင်းသိမ်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် MYSQL5လိုလိမ့်မယ်။ MYSQL5 မှ UTF-8 ကိုကောင်းကောင်းလေး support ပေးထားတယ်။ PHP ကို browser နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။ ဘယ် browser မှာ မဆို ကောင်းကောင်းလေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ IIS ပဲသုံးတယ်။ Aparche Web Server ပေါ်မှာ သွင်းနည်းတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ windows သုံးတဲ့သူတွေကတော့ IIS သုံးပြီးတော့ Linux သုံးတဲ့သူတွေကတော့ Aparche Web Server သုံးတယ်။
MySql ကရော MSSQL 2000 တင်ထားတဲ့ စက်မှာ ထပ်တင်လို့ရပါတယ်။ PHP ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ MYSQL သုံးသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆို Free Hosting ရလို့ပါ။ MSSQL ဆို internet မှာ free မရပါဘူး။
PHP စလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တော့ Visual Quick Pro Guide PHP And MYSQL For Dynamic Web Sites ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို recommend ပေးချင်ပါတယ်။ သူက PHP3 နဲ့4ရယ် MYSQL3နဲ့4အတွက်ပါ။ version ကတော်တော်လေး out နေပေမယ့် စလေ့လာမယ့်သူတွေ အတွက်တော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ ကို စာတန်ရဲ နည်းက ပို အထာကျမယ်ထင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်က ကျွမ်းကျင်လို့ လာရေးတာမျိုးမှုတ်ပါဘူး .. မိမိတုန်းက အခက် အခဲ ရှိခဲ့တာကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ မျှေ၀ ပေးတဲ့သဘော ပါ။ ခုနည်းကလဲ ရမ်းသမ်းပီးလုပ်ရင်းတွေ့ထားတာပါ။ စနစ်ကျ မကျ ကျနော်မသိဘူး ပြောဖို့ကျန်သွားတာ ကျနော် သုံးတာ PHP5နဲ့ MySQL5ပါ. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Developer Machine မှာသုံးဖို့ဆိုရင်တော့ ပြသနာ မရှိနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ :1:
ကျွန်တော်လည်း ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော့် အလှည့်က တော်တော်ညစ်ခဲ့ရတယ်ဗျ... ဟိုကရှာ ဒီကရှာနဲ့ လုပ်ခဲ့ရတာ... အခုတော့လည်း အဆင်ပြေသွားပါပြီ.. တော်တော်လေးကို ပြေနေတာပါ.. )
IIS, PHP and MSSQL အတွဲလေး ဘယ်လိုသုံးရ installလုပ်ရ သလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါ။ PHPနဲ ့MSSQL သုံးချင်ရင် SQLServerDriverForPHP installလုပ်ရတယ်လို ့googlingလုပ်တော့တွေ ့တယ်။ အဲ့ဒါသုံးရင် functionတွေကမတူတော့ဘူး။ xamppမှာ PHP, MSSQLအတွဲသုံးတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် production serverနဲ့IIS ပေါ်တင်တော့ ပြဿနာတက်ကော။ သိတဲ့လူများ ပြောပြပေးကြပါ။
ISS မှာ PHP သွင်းတာကို အပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်။ PHP နဲ့ MSSQL ဆိုရင် odbc driver ကို သွင်းပေးရပါတယ်။ XAMPP မှာ ပါပေမယ့် ISS အတွက်ဆိုရင် သီးသန့်ပြန် compile လုပ်ပေးရမလား ဒါမှမဟုတ် driver သွင်းရမလားတော့ မသိဘူးဗျ။ ပုံမှန် Apache server တွေမှာတော့ odbc driver သွင်းလိုက်ရင်ရပါတယ်။